प्रचण्डलाई कोरोना संक्रमण, कस्तो छ स्वास्थ्य अवस्था ? – Durbin Nepal News
प्रचण्डलाई कोरोना संक्रमण, कस्तो छ स्वास्थ्य अवस्था ?
पुस २४, २०७८ १:४४ मा प्रकाशित
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कोरोना संक्रमण भएको छ। केही दिनदेखि स्वास्थ्यमा सामान्य समस्या आएपछि उनले भेटघाट बन्द गरेर खुमलटारस्थित आफ्नै निवासमा स्वास्थ्यलाभ गरिरहेका थिए ।
शुक्रबार बेलुका पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा प्रचण्डलाई कोरोना पुष्टि भएको प्रचण्डकी छोरी एवम् स्वकीय सचिव गंगा दाहालले जानकारी दिइन्।
उनको स्वकीय सचिवसमेत रहेको कान्छी छोरी गंगाले भनिन् ‘उहाँ अहिले आफ्नै निवासमा स्वास्थ्यलाभ गरिरहनु भएको र स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ। यो बीचमा उहाँको सम्पर्कमा रहनु भएका सबैले सतर्कता अपनाउनुहुन अनुरोध गर्दछौं।’ ‘डाक्टरको सल्लाह अनुसार आइसोलेशनमा बस्नुपर्ने भएकोले पूर्वनिर्धारित सम्पुर्ण कार्यक्रमहरु स्थगित गरिएको जानकारी गरॉउदछौं ।’
यस अगाडि पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि पौष २५ गते बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित भएको थियो। महाधिवेशनपछि उनलाई बधाइ गएका धेरै नेता तथा कार्यकर्तामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि उनले पनि कोरोना चेक गराएका हुन् ।
पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना प्रत्येक दिन बढिरहेको छ । पार्टीका प्रमुख ब्यक्तिलाई कोरोना संक्रमण भएको नेपालमा यो पहिलो हो ।